Umzi mveliso wesahlulo sentsimbi - i-china udonga lwesahluli sodonga abavelisi, abaxhasi
Iprofayile yenkampani kunye neNkcubeko yeShishini
I-Balustrade kunye ne-Handrail
I-balustrade yentsimbi engenasici
Umatshini wesahlulo sentsimbi kunye neeNxalenye zeSinyithi zentsimbi
Udonga lwesahlulo sentsimbi
Iiglasi zoDibaniso lodonga
Uthango lwentsimbi engenasici kunye nokucoca
Isibiyeli steel stainless
IAluminiyam kunye neCopper Sheet Metal Parts
Aluminium Sheet Metal Amalungu
Icandelo leCopper Sheet Metal
HongKong kunye neMacau
Ihotele ye-Sanying Spa
Shenzhen Isakhiwo seMicrosoft Koton
Isikhululo sikaloliwe saseShenzhen eMantla
I-100 Keilor Road, i-Essendon, i-VIC 3041, iprojekthi yaseMelbourne
IZiko leBhola yeBhola yeDongguan
Ivenkile yaseBeijing LV
60A Edge Amanzi BLVD, Maribyrnong, VIC 3032, Melbourne p ...
I-SL-8014 yeLaser Sika izikrini zabucala Iintsimbi eziCociweyo zeScreen seGolders zaBahluli beAluminiyam zentsimbi yesikrini
Izahluli zentsimbi ziveliswa ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo. Enye kukusebenzisa ityhubhu yentsimbi ukusongela, enye indlela kukusebenzisa ipleyiti yesinyithi ukwenza ukusika kwe-laser. Xa ukhetha ityhubhu yentsimbi ukuba uyenze, kufuneka siqwalasele ubukhulu.
Ukuba unesithuba esikhulu okanye indawo evulekileyo yokuhlala, ukwahlula amagumbi- okwaziwa njengezahlulelo okanye izikrini zeShoji - yindlela entle nelula yokuzahlula okanye ukwahlula amacandelo ama-2 kuloo ndawo okanye ukubonelela nge-chic, indawo ekujongwa kuyo ngaphakathi igumbi. Ngenye indlela, ukwahlula igumbi kungasetyenziselwa ukubonelela ngendawo yabucala kwindawo evulekileyo, ukukhusela indawo engafanelekanga, okanye ukukhusela umlilo ovulekileyo. Izinto eziguquguqukayo kakhulu, ukwahlula amagumbi kubonelela ngesisombululo esilula kwiingxaki ezininzi zasekhaya, kwaye zijongeka njenge-grea
I-SL-8012 eqoshwe ngeSimbi engenasiphelo igumbi lokwahlula igumbi / uyilo lwesikrini udonga lokwahlulahlula.
Siye sajonga ngeenxa zonke kwinto esikholelwa ukuba zezinye zezona zinto zisemgangathweni kunye nokwahlulahlula igumbi ekuhlaleni ngaphandle. Sifumene isahluli sesinyithi / izikrini zomlilo; Abahluli begumbi lesitayile seShōji, Izahluli zamagumbi esiqhelo zeenkuni, Abahluli beGumbi lamaFoto abaHluliweyo abaHluliweyo beGumbi. Uluhlu lwethu luya kukunika inkuthazo yalo naluphi na uhlobo lwekhaya.
I-Laser Sika izikrini zabucala Insimbi yokuhombisa yodonga lwesahlulo sesahlulo sokuhombisa
Esi sahluli sodonga lwensimbi senziwe nge-laser cut to a exquisite rose pattern, entle kakhulu kwaye inothando. Kwaye emva koko ibe yi-PVD enemibala ngombala wegolide evuselelweyo, ngokuqinisekileyo iya kuba sisiqwenga somsebenzi wobugcisa obuhle bendlu yakho.
Igumbi lokulala elingaphandle elinamagumbi okulala elinaDolder Metal Steel Partition Designs ngaphakathi Indlu yokuhombisa yeLaser Sika Igumbi lesikrini
Esi sahluli sodonga lwentsimbi si-spliced ​​ngobukhulu obahlukeneyo beetyhubhu ezingenanto, emva koko sigqityiwe ngomphezulu wokuxubha kunye nombala we-matte, elula kwaye mfutshane.
Ngetekhnoloji ephezulu yokuqinisa amandla.
Ngenye indlela, oku kwahlulahlula igumbi kunokusetyenziselwa ukubonelela ngendawo yabucala kwindawo evulekileyo, ucime indawo engafanelekanga okanye ukhusele indawo evulekileyo. Iyahluka kakhulu, ukwahlula igumbi kubonelela ngesisombululo esilula kwiingxaki ezininzi zasekhaya, kunye nokuhombisa!
Ukwahlula okwenziwe ngokuCwangcisiweyo okuCwangcisiweyo kweNsimbi engenanto
* Ukuhlangana okulula kunye nokubonakala okuhle.
* Iipateni zoyilo ezikhoyo.
* Ukusebenza elubala, ukubuyisela kunye nobulukhuni.
Igumbi lokwahlulahlula ipaneli yesinyithi yokuhombisa iphaneli yentsimbi engenamfashini yanamhlanje kwigumbi lokuhlala kwigumbi lefanitshala
Esi sahluli sodonga lwentsimbi si-spliced ​​yityhubhu yentsimbi ethe tyaba, emva koko sagqitywa umphezulu ngombala we-Vacuum ion, kunye noyilo olumangalisayo lwephatheni yejiyometri, imfutshane kwaye iyahambelana.
Idume kakhulu kwigumbi lokuhlala loyilo lwesitayile okanye ihotele, ect.
INkomfa yeHlabathi yeHlabathi ye-Stainless & ...
Ingcaciso insimbi t eqhelekileyo ...
Umahluko phakathi kwe-SS304 kunye ne-SS316 yezixhobo
Umnxeba: +86 0769-38807989
Idilesi: No.1 Tangdu Road, Songbotang, Changping, Dongguan, China
© Copyright - 2010-2020: Onke amalungelo agciniwe. Iingcebiso - Imveliso eshushu - Imephu yendawo
Nkqo Handrail izibiyeli, Enyangweni Handrail isibiyeli, Stainless Handrail, Zokubambelela, Stainless ilifti Handrail, Plate yeSiseko seZandla,